အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်သို့ အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်သို့ အမှတ်တရ
အာဇာနည်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်သို့ အမှတ်တရ
Posted by နွယ်ပင် on Jul 20, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., News | 17 comments
ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်သို့ အဝင် ။
အဝေးကနေလှမ်းရိုက်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက် ။
ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်သို့ လာရောက်ကြသူများ ။
မနေ့က အာဇာနည်နေ့ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းပြတိုက်ကို သွားဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ။ နက်မောက်လမ်းကို ရောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်ကို သွားကြည့်ကြမယ့် သူတွေက အများသားပဲ ။ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက် ရှေ့ရောက်တော့ အထဲတည်းက ပြထားတာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ပေါ့ ပြီးရင် မသွားဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို
ပြမယ်ဆိုပြီး အားခဲထားတာ ပြတိုက်အဝင်ဝမှာက ဆိုင်းဘုတ်ကြီးက ဆီးကြိုလို့ ။
ဝင်ပေါက်တွင် ကင်မရာ ၊ လက်ကိုင်ဖုန်း နှင့် MP3 / MP4 တို့အားယူဆောင်ခွင့် မပြုသော ဆိုင်းဘုတ် ။
အဲတာနဲ့ ပါလာတဲ့ ပစ္စည်းလေးကို အလုအယက်အပ်ပြီး ဝင်ပေါက်ကနေဝင်တော့ နာမည်နဲ့ လိပ်စာကို တိုးဝှေ့ပြီးတစ်ခါထပ်ပေးရပြန်ပါတယ် ။
ပါလာသည့် အိတ်နှင့် ပစ္စည်းများအား အလုအယက် အပ်နေကြ ။
ပြတိုက် အဝင်ဝမှာတော့ ဗိုလ်ချု့ပ်မကျဆုံးမီအချိန်ထိ စီးနင်းခဲ့သော မော်တော်ကားကို ပြသထားပါတယ် အဲဒီကနေ အိမ်ထိသွားရမယ့် လှေကားခြေရင်းမှာတော့ ဖိနပ်ချွတ်ပြီး တပ်ရန်နှင့် ပါလာတဲ့ ထီးများကို တစ်ခါထပ်အပ်နှံကြရပါတယ် ။ အိမ်ကို ဝင်ဝင်ချင်းပထမဦးဆုံးအပေါက်မှာ ထမင်းစားခန်းကို တွေ့ရပြီး ဗိုလ်ချုပ်မကျဆုံးမီမနက်ကပြောခဲ့သော
ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားကိုလည်း ထမင်းစားပွဲ မှာ တွေ့ရပါတယ် ။ ထမင်းစားခန်းနဲ့ ကပ်လျက်မှာတော့ ဧည့်ခန်း နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု အမှတ်တရပုံများ ၊ ဗိုလ်ချုပ်ငယ်စဉ် ကျောင်းတက်ခဲ့စဉ်က အမှတ်တရပုံများ အပြင် ရှေးဟောင်းပန်းအိုးများကိုပါမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ အပေါ်ထပ်ကိုတော့ လူအယောက် (20) သာ တက်ခွင့်ပြုမယ့် အကြောင်းစာရေးထားပေမယ့် လာသမျှလူတိုင်းလူဦးရေ အကန့်အသတ်မရှိတက်နေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပြန်ပါတယ် ။ အပေါ်ထပ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ အိပ်ခန်း နှင့် သားသမီးများ အိပ်ခန်း အပြင် ဗိုလ်ချု့ပ် ၏စာဖတ်ခန်းနဲ့ အတူ ဖတ်၇ှူခဲ့သောစာအုပ်တချို့ကိုလဲ ပြသာထားပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဝတ်ဆင်ခဲ့သော အသုံးအဆောင် အနည်းငယ်ကိုလဲ ပြသထားပါတယ် ။ အိပ်၇ဲ့ အပြင်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်သား အောင်ဆန်းလင်းရေနစ်သေခဲ့သော ရေကန်လေးကိုလဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အပြန်မှာတော့ ကိုယ်အပ်နှံထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလုအယက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ရှာစနစ်ကို ကျင့်သုံးပြီး ပြန်လည်ရယူခဲ့ရပါတယ် ။
အပ်ထားခဲ့သော ပစ္စည်းများကို တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ ကိုယ်တိုင်ရှာနေကြသော ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လာ ပရိသတ်များ ။
အောက်က ပုံ (3) ပုံကိုတော့ မြတ်လေးငုံ ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါတယ် ။
ဗိုလ်ချုပ် အပန်းဖြေသည့် နေရာ
တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ကြားကပဲ ဓါတ်ပုံရအောင်ရိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲနော် (လေးပေါက်ကြီး သတိရလိုက်တာ..ဓါတ်ပုံရိုက်စရာရှိရင် )
မနွယ်ပင်ရေ..ကျွန်မတော့ မနေ့က ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်မရောက်လိုက်ရပါဘူး…..
ပုံတွေမတင်ခင် လူတွေမျက်နှာ ၀ါးအောင်လုပ်ထားရတယ်ထင်တယ်
ဟုတ်ပ ပန်ပန်ရယ် တကယ့်ကို တိုးတိုးဝှေ့ဝှေ့ ကြားကပဲ ရအောင်ရိုက်လာတာလေ
အမှန်က ပြတိုက်ထဲက ပုံတွေကိုရိုက်ချင်တာ အထဲမှာရိုက်လို့မရတော့ အပြင်မှာ ရိုက်တယ်ဟာ ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးရိုက်လာခဲ့တာလေ
မရိုက်နဲ့ဆို ပိုရိုက်ချင်ကြတာ … … ။ တစ်ယောက်တစ်လေများ ဖုန်းလေး ဘောင်းဘီအိတ် ထဲထည့်ပြီး ဖွက်မယူသွားကြဘူးလား … ။ ကြည့်ချင်လို့ပါ ဟီးဟီး ။
ဗျို့ သဂျီး … စပိုင်ကင်မရာလေးဘာလေး ၀ယ်လို့ မရဘူးလားဗျို့ … ။ အရင်ကတော့ ဖုန်းထုတ်ပြီး ရိုက်လျှင် လူတွေ သိပ်သတိမထားပေမဲ့ အခုအချိန် အရေးကြီးလို့ ဖုန်းဆက်တာတောင် ဓါတ်ပုံများ ရိုက်နေသလား ဘုကြည့်ခံရတယ် ….။ ဂျိမ်းစဘွန်းတို့ သုံးတဲ့ ဘောလ်ပင်ထဲမှာ ကင်မရာပါတာမျိုး … ။ နားကြပ်ထဲ ကင်မရာပါတာမျိုး ၀ယ်လို့ မရဘူးလား ဗျို့ … ။
ဖွတ်ပြီး ယူသွားမယ့် သူလဲမရှိနိုင်လောက်ပါဘူး etone ရယ်
သူတို့က အထဲဝင်ကာနီး မိန်းကလေး သပ်သပ် ယောကျာင်္းလေးသပ်ခြွဲပီး စစ်သေးတာ
အပြင်ကနေရိုက်တာတောင် အနားကပ်ပြီး ဘုရှိုးရှိုးနေတဲ့ သူကရှိသေးတယ် …
မြတ်လေးငုံဆိုဒ်မှာ ထင်တယ် အိမ်ထဲက ပုံတွေတွေ့တယ် ဘယ်လိုရိုက်လဲ မသိဘူး။ ပဲပြုတ်နံပြားကို ပန်းကန်လေးထဲထည့်ပြီး ပြထားတဲ့ပုံလေး တောင်ပါတယ်။ ထမင်းစားပွဲမှာ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်သူထိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စာလေးတွေ ထောင်ထားတာတွေ့တယ်။
ဟုတ်ပ မမှီရယ် ဘယ်လိုများ ရိုက်ယူလာတယ် မသိဘူး တော်လိုက်တာ
နွယ်ပင်ကတော့ သူ့ဆိုဒ်ကနေ ကူးယူလာခဲ့တယ် ..ဒီက မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် တင်ပေးမလို့လေ
ရိုက်မှာပဲ …. ရိုက်မှာပဲ … ငါ့ကို လာမတားနဲ့ …………
တခါမှမရောက်ဖူးဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေတင်ပေးတဲ့ နွယ်ပင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ကတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရောက်တယ်…ဒါပေမဲ့ ခြေတိုရော…အဲဒီကနေ အာဇာနည်ဗိမာန်ကိုသွားတာ ဟိုလမ်းပိတ်ဒီလမ်ပိတ်နဲ့လေ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို သတင်းသိခွင့် ၊ ပုံလေးတွေ မြင်တွေ့ ခွင့် ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ချုပ်ချုပ်ကြီးအလှည့်ကြမှပဲ ဓာတ်ပုံအစွမ်းကုန် ရိုက်ကြပေါ့ကွယ်….
သူ့ကိုတော့ ဓါတ်ပုံမရိုက်ချင်ပါဘူး .. နားရင်းပဲ ရိုက်ချင်တာ …
ရန်ကုန်မှာ တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအိမ်ရှေ့ကို တပတ် ၃ ရက်လောက်ရောက်တယ် …
မုန့်တီသွားသောက်တာ … ဟီးး ဟီိးးး အဲဒီ့နားက မုန့်တီဆိုင်က ကောင်းလို့ ။
အိမ်ကနေဆို နီးနီးလေး ဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ် ။ အာဇာနည်နေ့လို လူများတဲ့ရက်တော့ အ်ိမ်ထဲမ၀င်ဘူး။ ကြားရက်ဆို လူတွေ လာခဲတယ် အ၇မ်းနည်းတယ် ။ အဲဒီ့နေ့တွေမှပဲ အေးအေးဆေး ဆေး ၀င်ကြည့်တာ များတယ် ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆို ဗိုလ်ချုပ်အတွက်ပြင်ပေးထားတဲ့ ပဲပြုတ်အတုတွေ နှိုက်ပြီး ကစားကြသေးတယ် …. အခုတော့ မလုပ်တော့ပါဘူး ။ခြံကြီးက အကျယ်ကြီး သစ်ပင်ပန်းပင်တွေနဲ့ အေးဆေးတော့ ခဏ ခဏသွားထိုင်ဖြစ်တယ် ။ အ၇မ်းကို စိတ်အေးချမ်းတယ်။ အရင်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သွေးစွန်းနေတဲ့ အကျီ တွေပါ ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ် ။ အခုတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ထဲ ဘုရားရှိခိုးတဲ့ နေရာလေးရှိတယ် ထပ်ခိုးလိုပုံစံ သေးသေးလေး။ တယောက်ပဲတက်လို့ရတယ်။ အခုတော့ ပေးမတက်တော့ဘူး … အိမ်ပြန်ရောက်မှ ခိုးတက်ပီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့ပါအုံးမယ် ..
စိတ်ပဲရောက်ပြီး လူမရောက်နိုင်သေးတဲ့ခြေနေမှာ အလွမ်းပြေရပါတယ်။
သတိရစိတ်ကို ပိုစေပါတယ်။ တမ်းတစိတ်ပို များစေပါတယ်။
သူတပါးချစ်ခြင်းကို ခွဲတာ အပြစ်ဆိုတာမသိဘူးလား။
အဲဒါဆိုရင် အကုသိုလ် ဘယ်နှစ်ဆပါလိမ့်?
ပုံလေးတွေ တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နွယ်ပင် ပိုစ့်ကို နီနီရဲရဲနဲ့ အလှလိုက်ဆင်ပေးနေတာ ဘယ်သူများပါလိမ့်
ဘာအမှားမှလဲ မပါပဲနဲ့ …